Pakistan: ny “Mouvement Go Green” na ny hetsika alefa ry maitso · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Aogositra 2009 15:42 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 简体中文, 繁體中文, Español, বাংলা, اردو, English
Manana namana pakistanais ao amin'ny facebook na ao amin'ny twitter ve ianao? Raha eny, mazava ho azy fa misy ny sariny eo amin'ny fidirana ary ny sarin'ny sainam-pirenena pakistanais no rindrina ao aoriany. Izany dia vokatry ny “Mouvement Go Green” notarihan”i Farhan Masood sy ireo namany mpilatsaka an-tsitrapo manerana an'i Pakistan, izay nanova ny sarin'ny olona rehetra ao amin'ny facebook na twitter tamin'ny fametrahana ny sainam-pireneny ao an-damosiny. Nahoraka ity fanairana ny fitiavan-tanindrazana ity talohan'ny niandohan'ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany amin'ny cricket raha nampirisihina ny mpiserasera amin'ny twitter hampiasa ny #Pakcricket ho # ka nanjary lasa fironana faha4 tamin'ireo be mpandefa tao amin'ny twitter ny fanentanana. Amin'ity indray mitoraka ity dia mihevitra ny hamerina izany hetsika izany izy ireo amin'ny 14 aogositra, fankalazana ny fetim-pirenena pakistanais.
Adil Najam ao amin'ny Pakistaniat milaza ny heviny momba iny hetsika iny:
Inoako fa – sady antenaiko – fa ireo rehetra nanao iny hetsika maitso iny dia hanana foto-pisainana maitso tahaka ny anay. Fisainana amin'ny hambom-pom-pirenena. Ary amin'io foto-pisainana io dia raisiko an-tanan-droa io fomba io. Efa hitako sahady ny 14 aogositra maitso. Tsy hoho lokon'ny fiovana ihany tsy akory fa ho tena lokon'ny fo sy ny fanahintsika mihitsy!
Maneho ny hafaliany ny Dr Awab Alvi ao amin'ny Teeth Maestro :
Mahafinaritra ny mahita fikambanana pakistanais matanjaka sy mazoto ao amin'ny internet, ao amin'ny twitter ka hatrao amin'ny facebook, ary na dia ao amin'ny fikambanana tranainy Orkut aza. Manao izay tratry ny heriny ny tanora pakistanais haneho endrika vaovao ho an'i Pakistan ao amin'ny tontolon'ny teknolojia.
Midera ity fanehoan-kevitra ity i Pakfactor:
Vao haingana izay dia nahoraka tao amin'ny twitter ny nahazoan'i Pakistan ny anaram-boninahitra tompon-daka eran-tany amin'ny cricket raha niserasera tao amin'ny #Pakcricket ny mpiserasera twitter ary nametraka tantara tao amin'ny lohahevitra be mpanoratra. Hitovy amin'izay koa ny zavatra hitranga amin'ny fetim-pirenena raha handefa hafatra indray amin'ny fampahalalam-baovao i Pakistan manontolo ary hanaparitaka fa mitolona izy ireo, milamina ary notahiana. Aoka ho miabo isika amin'ny fihetsika sy fiteny mikasika an'i Pakistan ary haneho ny sarin'i Pakistan mbola tsy hitan'izao tontolo izao hatrizay. Tsy maintsy hasehontsika fa iray isika ary mirehareha amin'ny maha pakistanais antsika.”
Farhan masood no miteny fa “ity hetsika ity dia tsy tokony ho ferana ho an'i Pakistanais any an-toerana sy mpivahiny ihany, fa hatao koa ho an'ireo naman'i Pakistan rehetra hiara-hankalaza ny fetim-pirenena aminy”. Raha te hanova ny sary fidirana ianao dia iangaviana handefa mail amin'ny Greenkaro@gmail.com.